Mandrisika ny governemanta vaovao ao Malezia hanatanteraka fanavaozana amin’ny media · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2018 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 繁體中文, English
Ny filohan'ny mpanohitra Maleziana Anwar Ibrahim miarahaba ireo mpanohana azy nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2013, herintaona talohan'ny nigadrany. Noafahana izy tamin'ny 16 May 2018, andro vitsy taorian'ny fandresen'ny antoko mpanohitra. Antenaina fa handray anjara lehibe amin'ny governemanta vaovao tarihin'ny praiminisitra Mahathir Mohamad izy. Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr, Firdaus Latif (CC BY-NC-ND 2.0)
Nentanina ny governemanta vaovaon'i Malezia mba hanatanteraka ny fampanantenany tamin'ny fampielezan-kevi-pifidianana amin'ny fametrahana fanavaozana amin'ny fitantanana, izay ahitana ny fanafoanana ny lalàna manohintohina ny fahalalahana miteny. Na dia maro aza no midera ireo dingana sasany voalohany noraisin'ny governemanta vaovao, maro koa ireo mihevitra fa tsy maintsy apetraka ny fiovana matanjaka kokoa mba hiantohana ny fahalalaham-pitenenana.
Ny 9 May 2018, noresen'ny antoko Pakatan Harapan (PH) ny Barisan Nasional (BN) izay nanjakazaka teo amin'ny politika Maleziana nandritra ny 60 taona. Ny faharesen'ny BN dia noho ny fitakian'ny vahoaka ho an'ny fanovana fitantanana taorian'ny nahatafidiran'ny praiminisitra teo aloha Najib Razak tamin'ny tantara ratsy maromaro momba ny kolikoly. Voampanga ihany koa ny governemantan'i Najib ho nampiasa lalàna henjana hanagadrana mpitarika ny mpanohitra, hampitahotra ireo mpitsikera sy hanivana ny media.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra, namoaka fanambarana izay nitanisa ny sasantsasany amin'ny fanavaozana avy hatrany hotanterahiny ny PH raha mandresy amin'ny fifidianana izy, tahaka izany ny fametrahana filankevitry ny media ahitana ireo mpitarika ny fampahalalam-baovao sy ny fanavaozana ny lalàna henjana rehetra.
Ankehitriny, satria ny PH no lohan'ny governemanta vaovao, mampahatsiahy azy ireo vondrona fiarahamonim-pirenena isan-karazany mba hanatanterahany ny fampanantenany hanitsy ny lalàna mampahory, ny politika sy ny fandaharan'asa teo ambann'ny antokon'ny fitondrana teo aloha.
Nanamafy indray ny fandaharan'asany momba ny zon'olombelona ny Amnesty International, izay ahitana izao:
… zo amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fikambanana, fiarovana tsara kokoa ho an'ireo mpitsoa-ponenana sy ireo olona mitady fialokalofana, manaja ny zon'ny mponina tompotany, miaro ny olona LGBTI, manafoana ny sazy fanamelohana ho faty ary mamarana ny fanenjehana ireo mpiaro ny zon'olombelona.
Nangataka tamin'ny governemanta vaovao ny Lawyers for Liberty (Mpisolovava mandala ny Fahafahana) mba hanokatra ireo tranonkala sy bilaogy nakaton'ny Vaomieran'ny Fifandraisana sy ny Media marolafy Maleziana (MCMC). Nakaton'ny MCMC ireo tranonkala ireo noho ny fitaterana ny trangan-kolikoly nataon'i Najib.
Nanatevin-daharana ireo vondrona hafa ihany koa amin'ny fitakiana ny fanafoanana avy hatrany ny lalàna izay nampiasan'ny manampahefana matetika mba hanafihana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpitsikera ny governemanta, toy ny Lalànan'ny Fikomiana 1948, ny Lalàna Fisorohana ny Heloka bevava 1959, ny Lalànan'ny Fisorohana ny Fampihorohoroana 2015, sy ny Lalànan'ny Fifandraisana sy ny media marolafy 1998, ary ny Lalàna vaovao Manohitra ny Vaovao Faikany 2018 lany vao haingana.
Hatreto, dia nankasitrahan'ny ankamaroan'ny vahoaka ny valinteny voalohan'ny governemanta vaovao.
Voalohany, niasa tamin'ny famotsorana an'i Anwar Ibrahim, lehiben'ny mpanohitra teo aloha, izay nosamborina tany amin'ny hopitaly noho ny fiampangana azy ara-politika tamin'ny kolikoly sy ny sodomia.
Nanangana Komity ho an'ny Fanavaozana ara-panjakana ihany koa ny governemanta tarihin'ny PH mba hanaiky ny tolo-kevitra momba ny fanavaozana ny asa birao.
Nosokafana ireo tranonkalam-baovao sasany tamin'ny 17 May, toy ny Sarawak Report sy Medium.
Nesorina tamin'ny 14 Mey ihany koa ny fandraràna fivezivezena ho an'ilay mpanao sariitatra ara-politika sady mpikatroka, Zunar, mpitsikera mafy an'i Najib.
Nanamafy ihany koa ny Minisitry ny Atitany vaovao fa handinika haingana ny lalàna mampiadihevitra tahaka ny Lalànan'ny Fikomiana ny governemanta.
Nilaza ny minisitry ny atitany vaovao Muhyiddin Yassin fa handinika ny lalàna tahaka ny Lalànan'ny Fikomiana miaraka amin'ny faka-kevitry ny mpikatroka, sns ny minisitera, hijery ny fiarovana sisintany, hiaro ny fiandrianan'i Sabah sy Sarawak, hamaha ny olan'ny Indianina tsy manan-tanindrazana, ary hiresaka amin'ny UNHCR momba ny olana Rohingya.
Saingy nanaitra ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena (CSOs) ny fanambarana iray nataon'ny praiminisitra Mahathir Mohamad fa hanova ny lalàna manohitra ny vaovao faikany ny governemanta amin'ny famoahana famaritana mazava momba izay atao hoe vaovao faikany satria nampanantena ny PH tany am-boalohany fa hanafoana ny lalàna.
Nanazava ny antony tokony hanafoanana ny lalàna manontolo ny Sarawak Report:
Tsy maintsy havela haneho hevitra malalaka ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena ary koa avela handiso mihitsy aza, raha afaka mampiseho izy ireo fa ny fikasany dia ny hampahafantarana zavatra izay tena ninoany marina ary avela hanitsy sy hanova raha misy diso (mifanohitra amin'ny lainga natao sy misy fikasan-dratsy). Ireo no fitsipika mivoatra ankehitriny taorian'ny fahoriana sy hevitra marobe teo amin'ny demaokrasia maoderina kokoa ary tsara i Malezia raha manatevin-daharana azy ireo.
Fikambanam-piraisamonina 20 eo ho eo no nanasonia fanambaràna maneho fahadisoam-panantenana noho ny “hafatra mifangaro avy amin'ny fitondrana fiaraha-mitantana amin'ny fanafoanana ny lalàna vaovao manohitra ny vaovao faikany.” Nanolotra safidy hafa izy ireo:
Mino izahay fa ny vahaolana mahomby indrindra manoloana ny vaovao lainga sy ny vaovao diso dia ny fametrahana Lalàna momba ny Fahalalahana amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra federaly.
Nampahatsiahy ny PH ihany koa izy ireo fa tsy ampy ny fanavaozana ara-dalàna raha hamaha ny nataon'ny BN tamin'ny asa birao Maleziana:
… Ny fanavaozana momba ny lalàna dia tsy maintsy miaraka amin'ny fandrafetana indray ny andrim-panjakana nasionaly mba hiantohana ny fandraisana andraikitra, ny fahaleovantena sy ny fanajana ny zon'olombelona. Ankoatra izany, ny governemanta vaovao dia tsy maintsy mampandray anjara ny fiarahamonim-pirenena sivily amin'ny fandaharan'asa fanavaozana izay iarahana sy ifarimbonana.
Nitsikera ny polisy noho ny fisamborana lehilahy iray izay “nanevateva” ny praiminisitra Mahathir tao amin'ny Facebook ihany koa ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona. Nilaza ny polisy fa namaly fotsiny ny fitarainana momba ilay ahiahiana:
Nanamafy ilay politisianina menavazana Lim Kit Siang fa tokony hiova ao amin'i Malezia “vaovao” ity fitondran-tenan'ny polisy ity:
Ao amin'ny Malezia vaovao, tsy tokony hiankina amin'ny “iza” no nametraka ny fitarainana ny valintenin'ny polisy, fa “inona” no ao anatin'ny tatitry ny polisy, ary ny hetsika misy ny vahaolana sivily dia tsy tokony holazaina ho heloka bevava satria mahatafiditra ny praiminisitra na ny minisitra misahana ny raharaha.
Nilaza i Mahathir fa tsy miombon-kevitra amin'ny hetsika nataon'ireo polisy ihany koa izy ary nilaza fa hanao laharam-pahamehana ny fandinihana ny lalàna manjavozavo izay manameloka ny tsikera tsotra atao amin'ireo manampahefam-panjakana ny parlemanta.
Nankasitrahan'ny Foibe ho an'ny Asa Fanaovan-gazety Tsy miankina ny fanambaràn'i Mahathir momba ity tranga ity ary nitaky ny fampiatoana ny fampiasana ny lalàna manasazy izay mbola misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina. Namintina ny fanamby napetrak'ireo mpiaro ny fahalalahana miteny ho an'ny governemanta vaovao ihany koa ny vondrona:
Amin'izany, tena zava-dehibe ny firotsahan'ny governemanta fiaraha-mitantana Pakatan Harapan amin'ny fiarovana ny sehatra midadasika hisian'ny fifanakalozan-kevirta ampahibemaso amin'izao fitodihan'ny firenena mankany amin'ny fiofoana izao, sy hamelàna fandraisana anjaran'ny vahoaka betsaka kokoa ao amin'izany dingana izany. Anisan'izany ny fiarovana mazava tsara ny zo momba ny fahalalaham-pitenenana, na ivelan-tserasera izany na antserasera.